EH-HE10 Hair Styler & Straightener - Panasonic
ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသည့် အိုင်ယွန်းဘရပ်ရှပ် EH-HE10
အချိန်မရွေး နေရာမရွေး စိုရွဲနက်မှောက်သည့် ဆံပင်ကို ရယူလိုက်ပါ
ဘရက်ရ်ှက အိုင်ယွန်းအမများကို ထုတ်ပေးသည့်အတွက် ဆံပင်၏ တည်ငြိမ်လျှပ်စစ်ကို အားနည်းစေသောကြောင့် ဆံပင်ကို သပ်ရပ်၍ ပုံကျနေစေသည်။ ထို့ပြင် အိုင်ယွန်းအမများသည် ဆံသားမျက်နှာပြင်တွင် တွယ်ကပ်နေပြီး ဆံပင်ကို ချောမွေ့၍ စိုလွင်၊ တောက်ပြောင်နေစေသည်။
တည်ငြိမ်လျှပ်စစ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည့် ဆံပင် တွန့်လိမ်ခြင်းနှင့် ပွယောင်းယောင်းဖြစ်နေခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်
ဘရပ်ရ်ှမှ ထုတ်ပေးလိုက်သော အိုင်ယွန်းအမများက ဆံပင်တွင် တွယ်ကပ်နေသည် အဖိုလျှပ်စစ်ဓာတ်များကို ဓာတ်ပြယ်စေပြီး ဆံသားထဲမှ ထွက်ပေါ်နေသည့် တည်ငြိမ်လျှပ်စစ်ကို အားနည်းစေသည်။ ထို့ပြင် အိုင်ယွန်းအမများ၏ အစိုဓာတ်ဖြည့်ပေးသည့် အစွမ်းကြောင့် ဆံပင်သည် ချောမွေ့လာကာ တွန့်လိန်ကောက်ကွေးမနေတော့ဘဲ ပို၍ ဖြီးရသင်ရ လွယ်ကူလာစေသည်။
အဆင်ပြေပြေ သယ်သွားနိုင်သဖြင့် သင့်လက်ထဲတွင် အံဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်နေပါသည်
သင့်အိတ်သေး သို့မဟုတ် မိတ်ကပ်ထည့်သည့်အိတ်ထဲတွင် အံဝင်ခွင်ကျရှိသည်အထိ ကျစ်လျစ်သိပ်သည်းပါသည်။ အထူးတလည် ရေးဆွဲဖန်တီးထားသည့် ကာဗာပါရှိသဖြင့် ဘရပ်ရှပ်ကို အိတ်အတွင်းထည့်၍ သယ်ယူသည့်တိုင် ပျက်စီးသွားမည်ကို စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။
ကူရှင်ထည့်ထားသည့် ဝက်မှင်ဘီးဖြင့် သင့်ဦးရေပြားကို ညင်သာစွာ ဖီးသင်နိုင်ပါသည်
ဘရပ်ရှ်၏ အောက်ခြေတွင် နူးညံ့သော ရာဘာကူရှင်ကို အထူးပြုလုပ်၍ ထည့်သွင်းထားသည်။ ၎င်းက ဘရပ်ရ်ှအသုံးပြုစဉ် သင့်ဦးရေပြားကို နှိပ်နယ်ပေးပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပင် သင့်ဦးရေပြား၏ ရေဓာတ်ကို မျှတစေကာ ဦးရေပြားကို ပိုမိုကျန်းမာစေသည်။
အလွယ်တကူ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်အတွက် ဆေးကြောလျှော်ဖွပ်နိုင်သည့် ဝက်မှင်ဘီး
ဘရပ်ရ်ှအပိုင်းကို ကိုယ်ထည်မှ ဖြုတ်ပြီး ရေထဲတွင် ဆေးကြောနိုင်သည်။ ၎င်းကို အချိန်ပြည့် သန့်ရှင်းစွာ ထားရှိရန် လွယ်ကူပါသည်။
Negative ions can suppress static electricity to make hair smoother, moisturized and frizz-free.
Compact and portable design for easy carry.
Washable and removable comb pad for easy cleaning.